I-venous thromboembolism ✅ Izimpawu Nezindlela zokwelapha
Thola ku-Inthanethi ▷ 🥇
IVenous thromboembolism o (VTE) yigama elichaza izifo ezimbili: the i-vein thrombosis ejulile (TVP) kanye i-pulmonary embolism (EP).
I-vein thrombosis ejulile yisifo esidalwa ukwakheka kwamagabha ngaphakathi kwemithambo ejulile, imvamisa emaphethelweni aphansi. i-pulmonary embolism yi-blockage emithanjeni yamaphaphu ebangelwa ukwakheka kwama-clots (thrombi).
Okulandelayo, sizokunikeza imininingwane efanele ngalesi sifo. Sizokhuluma ngabo izicikanye izimpawu ezivame kakhulu futhi kunokwenzeka zokwelapha.
Sincoma ukuthi uqhubeke nokufunda:
Izici ze-venous thromboembolism
Izimpawu ze-venous thromboembolism
Izindlela zokwelapha ezijwayelekile
I-Thromboembolism iboniswa ngu Ukwakheka kweziqhekeza zegazi ngaphakathi kwemithambo, okuvimba ingxenye noma yegazi ngokuphelele.
I-clo, eyaziwa nangokuthi thrombus, kwakheka lapho kunokungalingani ohlelweni lokuhlangana.
Izingqinamba ngemuva kokuhlinzwa, ukuqagelwa kofuzo, obesidadukubhema sokukhulelwa noma isikhathi eside sokungakwazi ukuhamba kahle kungaholela ekwakhiweni kwezinqe zegazi nokwakheka kwe- "thrombi".
El Umkhakha wabesifazane utholakala kakhulu ngalesi sifo ngenxa yokwanda kwemvamisa yezinkinga zofuzo eziholela ku-thrombosis. Ama-hormone abantu besifazane bavame ukudala ukuphazamiseka kwegazi ukugqwala kubantu asebevele benomlando womndeni we-thrombosis.
Lapho sitholwa kusenesikhathi, amathuba okuthola ikhambi nokuhlalisana ngokuthula nalesi sifo makhulu.
Ukwelashwa ngemithi ye-anticoagulant, esebenza "ngokunciphisa" igazi nokunciphisa ukwakheka kwama-clots, kuyindlela ejwayelekile esetshenziswa odokotela ukulawula nokuvimbela izinkinga ezifana ne-pulmonary embolism.
Ekuqaleni, ukuxilongwa kwe-thromboembolism kungabonakala kukhathaza, kepha nge a ukwelashwa okufanele nokulawulwa okungapheli kwezokwelapha, kungenzeka ukuthi uphile kahle nalesi sifo.
Prakthiza umzimba ukukhanya kubaluleke kakhulu ukuvikela lesi sifo ukuthi singathuthuki. Ukuhamba okungenani imizuzu engama-30 nsuku zonke kusebenze ukugeleza kwegazi futhi kwandise ukuhamba, kuvimbela ukwakheka kwe-thrombi entsha futhi kusize umzimba uwonke.
Izitokisi zokucindezelwa okuphezulu zingabalingani abathembekile balabo asebevele benaso lesi sifo futhi namandla okusebenzisa kumele anqunywe futhi alawulwe ngudokotela ngokuya ngesimo somtholampilo wesiguli.
I-venous thromboembolism ingaletha okulandelayo izimpawu nezimpawu:
Umbala wesikhumba omnyama.
Ukuphathwa kwezicubu ezingaphansi.
Ukwelashwa kwe-venous thromboembolism kuqukethe yehlisa izimpawu eziyingozi zesifo, vimbela ukwanda kwezifo nokuncipha kokuwohloka kwesifo se-post-thrombotic syndrome. Ukusetshenziswa kwemithi yokungena noma yomlomo kuyakhonjiswa.
I-laber yaseBayer, yokuhlaziya ubungozi bokwenza i-VTE, yaxhasa izifundo zokuhlaziya ukusetshenziswa kwezindlela zokuvimbela inzalo ezihlanganiswe ne-drospirenone.
Njengokuvimbela inzalo kwe-levonorgestrel, lIzindlela zokuvimbela inzalo ezihlanganiswe ne-drospirenone zinesimo esiphansi se-VTE ngezindlela zokuvimbela inzalo ezenzelwe i-drospirenone., okuwumcimbi onqabile futhi ongaphansi kokungabonakala kokukhulelwa kanye ne-puerperium.
I-whatsapp yamaqembu we-WhatsApp
Amaqembu Abangane be-WhatsApp
Gcina igama lami, i-imeyili kanye newebhusayithi kulesi siphequluli ngokuzayo uma uphawula.
I-Direct microlaryngoscopy ene-CO2 laser noma ngaphandle kwayo
Ukuhlinzwa KwamaRobotic (Tors) -.
Ukutheleleka kwe-urinary tract
Isifo se-Vaginal yeast - konke odinga ukukwazi
I-Quarantine: izicelo eziyi-12 zokuqeqesha ubuchopho bakho
Ungalihumusha kanjani izwi ku-Google Humusha?
Funda umlando wokuthumba owenze igama elithi "Stockholm Syndrome"
Ungazifaka kanjani izikhumbuzi ku-Outlook
Funda ukuthi ungasishintsha kanjani isithombe sakho sephrofayili ku-Badoo
Isebenza kanjani iGoogle Humusha? [Umhlahlandlela Ophelele 2020]
Ungakuhumusha kanjani ngesithombe usebenzisa i-Google Humusha?
Bukela i-anime enhle kakhulu engu-40
IGoogle Amamephu ngomculo? Thola ukuthi ngeSotify kanjani
Izicelo eziyi-10 zokulwa nokukhathazeka ngesikhathi sokuhlukaniswa
Iziza ezinhle kakhulu zokulanda umculo wamahhala we-MP3
Imidlalo eyinqayizivele yeNintendo Shintsha
I-Google Amamephu ene-Google Humusha: isetshenziswa kanjani?
Yize kunjalo, alandelwa kanjani amacala esifo se-bubonic eminyakeni engama-500 eyedlule?
Umhumushi WoLimi Lwezandla LwaseBrazil: Ungalanda kanjani?
Badoo: Ukuqomisana kwawo wonke umuntu: indlela yokusebenzisa uhlelo lokusebenza
AmaMayor awazange abikezele ukuphela komhlaba ngoJuni 2020; qonda!
Umlilo wamahhala: izeluleko zokuwina kuzo zonke izinkundla
Ukwehla kwesisindo Alimentos Android Izilwane Amafayela Asusiwe Inhlalakahle Amaphasiwedi Umzimba Curiosities Ukuthola ukudla Umehluko Ukukhulelwa Izifo Umndeni Injongo Ukufaneleka historia Izifo Ukuhunyushwa Kwephupho I-iphone Imidlalo Yeselula Ukukhulelwa Minecraft Imoto etholiwe Iziphequluli Netflix Ukudla okunomsoco Imikhuleko Izinja Izitshalo Zokwelapha Ezempilo Okushiwo Amagama Akuhlukaniswe Izindawo Ezithandwayo Izithako Zokudla Izimpawu Izimpawu kusuka ku-A kuye ku-Z Tarot Cheats Imidlalo Imidlalo yevidiyo Phila kahle Amavidiyo ne-TV Whatsapp Afrika
Instagram Izithombe zethu!
Youtube Bheka amavidiyo ami!